आश कोही मेरो र दासढुंगाको ~ The Nepal Romania
आश कोही मेरो र दासढुंगाको
3:33 AM No comments
काठमाडौं/ आफू अभिनीत दुई फिल्म दासढुंगा र कोही मेरोप्रति नायिका सञ्चिता लुइँटेल निकै आशावादी छिन् । कोही मेरो ११ र दासढुंगा १८ भदौदेखि मुलुकभर एकसाथ प्रदर्शन हुँदै छन् । आफूले अभिनय गरेका अहिलेसम्मका फिल्ममध्ये यी दुई फिल्म विशेष भएको उनी बताउँछिन् ।
'दासढुंगा र कोही मेरो मैले निकै आश गरेका फिल्म हुन्,' सञ्चिता भन्छिन्, 'दुवै फिल्ममा मैले बिल्कुलै नौलो भूमिका निभाएकी छु । त्यसकारण मलाई यी फिल्मप्रति निकै भरोसा छ ।' नायक निखिल उप्रेतीसँग बिहे गरेर मुम्बई बस्दै आएकी सञ्चिता केही दिनदेखि राजधानीमा छिन् । पछिल्लोपटक पर्खी राख हैको डबिङ गर्नका लागि काठमाडौं आएकी उनी बिहीबार मुम्बई र्फकने बताउँछिन् । भन्छिन्, 'डबिङका र आफ्नो निजी कामका लागि आएकी थिएँ । बिहीबार र्फकंदै छु ।'
आफू मुम्बईमा भारतीय टेलिभिजन च्यानल कलर्स र स्टार प्लसका टेलिसिरियलका लागि वर्कसपमा लगेको भए पनि नेपाली फिल्म अभिनयबाट टाढा हुन नसक्ने बताउँछिन् उनी । मुम्बईमा आफ्नो सम्भावना बढेर गएको बताउँदै उनले भनिन्, 'म नेपाली फिल्म क्षेत्रबाट टाढा हुन सक्दिनँ ।' आफूलाई केही नेपाली फिल्मबाट अफर आए पनि तत्कालै निर्णय गर्न नसकेको बताउँछिन् उनी । 'मुम्बईमा पनि मैले अवसर पाएकी छु । त्यसकारण अहिले नै निर्णय गर्न सकेकी छैन,' उनी भन्छिन्, 'तर, त्यहाँ सफल भए पनि नेपाली फिल्म भने खेल्छु म ।'
मनोज पण्डित निर्देशित दासढुंगा र आलोक नेम्वाङ निर्देशित कोही मेरोको रिलिजमा आफू नेपालमा नरहने भएकाले बेचैनी बढेको बताउँछिन् उनी । भन्छिन्, 'वर्कसपमा सामेल हुन ढिला भइसक्यो । त्यसैले मन भएर पनि फकर्ंदै छु ।' दुई फिल्मको व्यावसायिक रिपोर्ट मुम्बईबाटै बुझ्ने उनले बताइन् ।
पाँच सय भन्दा बढी ब्लु फ्लिम नेपाल मा नै बन्यो भिडियो हेर्नुस
प्रचण्डले पनि खाए थप्पड !
काठमाडौं, मंसिर १ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथीएक सर्वसाधारणले हातपात गरेका छन् । एमाओवादीको भृकुटीमण्डपमा जारी च...
निखिल र संचिताको बिवाह हल्ला मात्र
श्वेता राष्ट्रपतिसँग बेइजिङ
ऋचा प्रेगनेन्ट भएको आशंका
आशिर्वाद माग्दै शोभित
मिस नेपाल शुभेच्छा
ह्याप्पी बर्थडे राजवल्लभ
क-कसले जिते अवार्ड ?
बाजी मार्‍यो 'छोडी गए पाप लाग्ला'ले
रेखाले हराइन् हिराको औठी
अब कारबाही कसलाई ?
उपत्यकाबाहिर बीस लाख
नवललाई ज्यान मार्ने धम्की
भुनिया अब नायीका
नायिका सञ्चिताको घरमा चोरी
उत्ताउलो लुगा लाउदिनन् झरना
रिलिज भएनन् विदेशी
समिक्षा : 'कोही…मेरो '
होल्डओभर गिरेन दुवैको
रेखा थापाले माओवादी कमान्डरको भूमिका निर्वाह गर्ने...
एड्भान्स बुकिङ सुरु
आलोक आमासँग दक्षिणकाली
टङकिस छैन 'पलपलमा'
भुवन दम्पतीको निर्णय
नायक भए हवल्दार
कतारमा 'गंगाजल' र 'सिलसिला'
शुक्रबार बिहान 'कोही मेरो' को प्रिमियर
सुरेशदर्पण मलेसिया प्रस्थान
लक्की फाईभ रेखा
'दसगजा हेर्न ५० हजारसम्म तिरेका छन्'
किन दंग छन् उदय ?
एक दिनमै उत्रियो फिल्म
सुन्दरीको बुटिकमा सुन्दरी
ऋचाका दुई सर्त
पछि हट्यो 'पलपलमा'
झरना र झरी
हास्यव्यंग्यका लागि गाइजात्रा नै कुर्नुपर्छ र ?
ईश्वरसँग मेरो ठूलो गुनासो छ ( अन्तर्वाता)
राई इज किङका किङ
ऋचालाई फ्यानको प्रपोज
नेताहरूको माझ 'नाई नभन्नु ल' को प्रिमियर
हृयाप्पी बर्थडे अरूणिमा
नेफ्टा चलचित्र महोत्सवको आज समापन
रेखाको बर्थडेमा उधारो चुरा
चलचित्र प्रचारप्रसारको सजिलो माध्यम फेसबुक
धकेलियो रिलिजको मिति
निशा अब भिजे
श्रीकृष्ण र स्वेतालाई दोलखामा पञ्चेबाजा सहित स्वाग...
रिजर्भ चाहन्छन् आर्यन
आर्यनको रेट साढेचार लाख
सातामै असी लाख
सिनेकर्मी लट्ठिए दोलखामा
वेदुलाई भ्वाइस अफ टिनको उपाधि
राजेशको ननभेज जोक
मलेसियामा नाच्दैछिन् नम्रता
निखिल काठमाडौं आउँदैनन्
मेलिनाको मुल्याङकनमा नेपाली हिरो
रोज राणा जेल चलान
३१ फिल्म ३२ अवार्ड
सच्चा प्रेम कि पहिलो प्रेम
"हिम्मत हारेकी छैन
राजेश हमाल र कोमल वली सदभावना राजदूत
मेरो अनुभव ऋचा शर्मा (नायिका)
सबैलाई भ्याइन् निरुताले
दिपक लिम्बुको 'श्रोता'
कमल कृष्णले गरे निखिलको डबिङ
'फस्ट लभ' मा पनि हिन्दी चलचित्रको गन्ध
सुन्दरीजलमा मलाई मन पर्‍यो